M1: Linus Torvalds inoda maMacs matsva kumhanyisa Linux | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yenhau dzinonyanya kukosha nezve komputa yegore ndeyekuti Apple yaratidza uye yatotanga makomputa ayo ekutanga ne SoC M1. Nhau dzakakosha nekuti zvivakwa zvayo iARM Uye zvinhu zvinogona kuchinja zvakanyanya, zvekuti panotove nemamwe makuru mabhurani achifunga kuvhura maARM makomputa. Asi nhau dzatinokuunzira nhasi hadzisi dzeApple, kana kwete zvachose. Uye ndeyekuti Linus Torvalds anofunga kuti maMacs matsva isarudzo yakanaka, kana vakashandisa Linux.
Saka akareurura kumushandisi akabvunza nezve Apple malaptop matsva, uye baba veLinux vakamuyeuchidza kuti akamboshandisa MacBook makore gumi apfuura, uye akangoisiya nekuda kwematambudziko eescreen ayo Apple yainonoka kugadzirisa. Torvalds anovimbisa kuti iwo Mhepo nyowani ichave yakakwana, chero bedzi yaisashandisa macOS (kana pachena Windows).
Panguva ino M1 + Linux = zvakaoma kufungidzira
Apple ichangobva kutaura izvozvo nyowani M1 Macs inogona kumhanya Windows, asi zvese zviri kuMicrosoft. Uye ndine urombo kuti uzviise nenzira iyoyo, asi Cupertino-based kambani iri kuchinja kubva kuLinux, kusvika parizvino haina kutaura kana imwe yeanoda masisitimu anoshanda achakwanisa kumhanya pane imwe yemakomputa matsva eApple.
Pamwe, Linux inogona kushanda zvakare mune M1 uye zvaizotendererawo kune vanogadzira, mune ino Torvalds nekambani, asi haana tariro zvakanyanya nekuti haana nguva yekusvika pairi kana kuda kurwa nemakambani anoita kuti zvinhu zvive nyore.
Chero zvazvingaitika, Torvalds ndomumwe wevashoma vangatenge Mac kuti vaise Linux pairi, kunyange chiri chinhu chaakamboita nekuti anofunga kuti Apple makomputa akanaka ... kana uchikwanisa kuzvitenga. Pachezvangu, chinhu chega chinondifadza nezveiyo Apple neARM nyaya ndeyekuti, mukupedzisira, vagadziri vazhinji vanoita kuti yavo software ienderane neichi chivakwa, chimwe chinhu chinosara kuti chionekwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linus Torvalds inoda kuti maMacs matsva neM1 aenderane neLinux
Zvinotaridza kuti VaTorvalds vari kutsvaga basa kuApple.
Linux haisati yave kudiwa kana huremu mumusika kuitira kuti idzi mhuka dzinongofunga nezvebatsiro dzisimudze munwe kuti zvinhu zvive nyore. Kana ikavaunzira mabhenefiti anonaka, kana kurasikirwa kwakanaka, ivo zvirokwazvo vaizofunga neimwe nzira. Kunyangwe ichirerutsa kuenderana kweLinux chokwadi ichivabatsira kutengesa zvishoma, izvi zvishoma zvinoita sekunge hazvivanakidze.
Handikwanise kufungidzira izvozvo! Mac inoenderana Linux inopesana neApple mutemo (yakavharwa) uye Linux (yakavhurika)
Kune maviri akataurwa pazasi:
- Zvinotaridza kuti VaTorvalds vari kutsvaga basa kuApple (ndinozvitenda zvakanyanya)
- Linux haisati yave kudiwa kana huremu mumusika kuitira kuti zvipuka izvi zvinongofunga nezve mabhenefiti zvifambise chigunwe kuita kuti zvinhu zvive nyore. Kana ikavaunzira mabhenefiti anonaka, kana kurasikirwa kwakanaka, ivo zvirokwazvo vaizofunga neimwe nzira. Kunyangwe ichirerutsa kuenderana kweLinux chokwadi ichivabatsira kutengesa zvishoma, izvi zvishoma zvinoita sekunge hazvivanakidze.
Komuredhi, kuti makambani anoda kuita mari hachisi chinhu chakashata, pane izvo zvinokurudzira musika wezvehupfumi wenyika uye zvinoita kuti uve nepfungwa yekuva muridzi nekutenga zvinhu, Linux ine musika wakawanda kupfuura vashandisiwo zvavo vanoona uchishandiswa mune super- sevha / Masumbu uye DhataCenters, kune mushandisi wekutanga sesu, inotipa kuvanzika kudiki, kutonga pamusoro peedu Hardware uye 1000 nzira dzekugadzirisa software. Isu tiri kagumi zvakapetwa pane kushandisa MacOS kana Windows, asi isu tatoziva kuti Linux haisi yemunhu wese.
Uye ndinoda kuti zuva ribude usiku, asi ndinoziva kuti hazvigoneke ...
Ini ndinobvunza kuti chii chakashata nekambani inoita mari ... kuti varege kuzviita nenzira yakatendeseka, dzimwe nguva zvichikonzera matambudziko kune vavanokwikwidza, nekuti chero munhu asina chitadzo, kanda dombo rekutanga, mumwe munhu kunze uko aiziva maitiro iti ...
Uye Mac (inoshanda sisitimu yandisingade, asi ndinoyemura zvigadzirwa zvavo nemavakirwo azvo) ndeyaApple uye ivo vakasarudza yakavharika modhi, uye hapana chakaipa pane izvozvo, Kambani ine zvigadzirwa zvayo inoita izvo inoda uye yakaronga ... zuva iro izvi zvichanzwisiswa, zvese zvichave nyore
Uye hongu, zvinoita kunge Linux Torvald ingangodaro iri kukumbira basa kuApple (Icho chinotsvinya, asi iwe hauzive kuti bara rakabvepi)